အပူလှိုင်းတံပိုး | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
တစ်ခါတစ်ရံအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့ကို ဦး တည်စေသည် အစွန်းရောက်အခြေအနေများ ငါတို့ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမှန်းမသိဘူး ဤအရာတစ်ခုဖြစ်သည် အပူလှိုင်းများတစ်စုံတစ် ဦး ၏ဘဝကိုအဆုံးသတ်စေနိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာသင်လိုအပ်သမျှကိုရှာနိုင်သည် အလွန်လေးနက်သောသက်ရောက်မှုများကိုကာကွယ်တားဆီး အဲဒါကငါတို့ကိုသေစေနိုင်တယ်။ ကောင်းမွန်သောဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အလုအယက်နာရီနှင့်ကြာချိန်စသည်တို့ကိုရှောင်ပါ။ ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီရန်။
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရအပူလှိုင်းများကိုသတိပေးထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့နိုင်ပါ မိုးလေ ၀ သဝန်ဆောင်မှုများ ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကအစွန်းရောက်အခြေအနေတွေကိုအမြဲကာကွယ်နိုင်တယ်။ ဤနေရာတွင်သင်သည်အခြေခံကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသဘောပေါက်နားလည်နိုင်သောသဘောတရားများနှင့်စကားလုံးများကိုသင်ယူနိုင်သည်။
por Emilio Garcia လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
စပိန်နိုင်ငံရဲ့နေရာအတော်များများမှာ ၅၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်စ်ထိရောက်တဲ့အပူလှိုင်းကငါတို့ကိုထားခဲ့တယ်။
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့ 8 လအတွင်း .
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုးလေ ၀ သနှင့်ဇလဗေဒဆိုင်ရာအကြောင်းများကိုပြောသောအခါနှစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ရပ်များရှိသည်။
por Claudi casals လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်သောကြာနေ့တိုင်းပြည်အများစုတွင်အပူချိန်အလွန်မြင့်မားသောကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်လာ
ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအပူချိန်များအတွက်သတိပေးချက်များနှင့်အတူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအသိုင်းအဝိုင်းအများအပြားနှင့်အတူနိုးသောယနေ့ကဲ့သို့သောနေ့ရက်များသည်, မျှတသည် ...
ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံအားလုံးသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတူညီစွာပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါ။ စပိန်သည် ...
ပူနေတာလား ဒါဟာလျော့နည်းဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ စပိန်နဲ့ဥရောပဒေသအတော်များများမှာကျွန်တော်တို့ဟာရက်အနည်းငယ်ကြာခဲ့ပြီ။
သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအထက်တွင်သက်ရှိများသည်အလုပ်လုပ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ WWF မှကျွမ်းကျင်သူများ (ရန်ပုံငွေ ...
နွေရာသီကာလအတွင်းကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားတွင်သာမိုမီတာရှိမာကျူရီသည်အလွန်မြင့်မားသောတန်ဖိုးသို့မြင့်တက်သည်။ သို့သော်မည်သည့်အချိန်တွင် ...
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကတစ်ခုခုသတိမပြုမိမိပါကအပူကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ များစွာသော ...